Health « Nagarik Khabar
यौन जीवनसँग सम्बन्धित ५ रोचक कुरा
काठमाडौं । मानिसको जीवनमा यौन अनिवार्य र प्राथमिकताको विषय हो । यसका विषयमा छलफल गर्दा विभिन्न खालका टिका टिप्पणी हुने गरेका छन् । तर, मानिसले यौन जीवनका विषयमा सबैभन्दा धेरै
हाम्रो जीवनशैली : मिर्गौला स्वस्थ राख्न यसो गरौँ
काठमाडौं। शरीर स्वस्थ राख्नका लागि खानपान, सरसफाईदेखि शारीरिक व्यायमसम्म सबै महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसक्रममा शरीरमा सबै अंगहरु स्वास्थ र सफा राख्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यक्ति स्वस्थ रहनका लागि मृगौलाको
३३ वर्षीय नेपाली डा.रोसन झाको अमेरिकाको न्युयोर्कमा निधन
न्युयोर्क । नेपाली युवा डाक्टर रोसन झाको निधन भएको छ । डा.झाको ३३ वर्षको उमेरमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा गत बुधबार निधन भएको हो । मेडिसिन विषयमा पिजी अध्ययन लागि डा. झा
ओठ फुट्ने समस्या छ ? छुट्कारा पाउन यसो गर्नुहोस्
काठमाडौं । प्रायः मानिसहरुमा हिउँदको मौसममा ओठ फुट्ने समस्या हुन थाल्छ । डाक्टरहरू भन्छन् कि शरीरमा पानीको अभाव हुँदा यो हुन्छ । वास्तवमा हिउँद लाग्नासाथ हामी पानीको उपभोगलाई कम गर्छौँ,
एजेन्सी । तपाईँलाई कतै रातिमा निद्रा राम्रोसँग नलाग्ने समस्या त छैन ? समस्या छ भने बेलायती र अष्ट्रेलियाका अनुसन्धानकर्ताले तपाईँका लागि विभिन्न सुझाव पत्ता लगाएका छन् । बेलायती र अस्ट्रेलियाका
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ‘उपहार’ : ज्वाइँ र भतिजालाई प्रतिष्ठानमा नियुक्ति !
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालका ज्वाइँ र भतिजाले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियुक्ति पाएका छन् । उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले मन्त्री ढकालको दबाबमा उनका ज्वाइँ र भतिजालाई
संघीयतामा स्वास्थ्य : मंसिर १५ गते एकैसाथ हुँदैछ ३९६ अस्पताल शिलान्यास (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले आगामी मंसिर १५ गते देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा एकैसाथ अस्पतालहरुको शिलान्यास गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय सरकारको योजनामा देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा ३ सय ९६ वटा
मधुमेहको समस्या छ ? यसरी गरौँ नियन्त्रण !
एजेन्सी । विश्वभर अहिले धेरै मानिसहरू मधुमेह रोगबाट ग्रसित छन् । मधुमेह रगतमा चिनीको अनियन्त्रित तहको कारण हुन्छ । मधुमेह दुई तरिकामा हुन्छ । एक, जब व्यक्तिको शरीरमा पर्याप्त इन्सुलिन
डोल्पा । उपल्लो डोल्पा क्षेत्रमा पर्ने फोक्सुण्डो स्वास्थ्य चौकी करार कर्मचारीको भरमा चलेको छ । स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत तीन जना स्थायी कर्मचारी चार महिनासम्म पनि कार्यालयमा नपुगेपछि स्थानीय दुई जना करार
चिसो भगाउने, रुघा र खोकीमा चार चियाका यस्ता काम
चिसो बढ्न शुरु भइसकेको छ । यो समयमा रुघा–खोकी लाग्नु सामान्य कुरा हो तर कोरोना महामारीका कारण यस्ता रोगहरुमा पनि अब सजक र सचेत हुनुपर्ने भएको छ । रुघा र